AVI vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVI iyo MP4
AVI u taagan tahay Audio Video Interleave iyo MP4 waa magaca rasmi ah oo ka mid ah MPEG-4 Qaybta 14. Labada yihiin weelal file in lagu qaado ka weyn ee laba nooc oo ah faylasha: audio iyo video. Waxay kaa caawin in hoorto files kuwan. Waxay cadaadisaa file multimedia ah oo aad u sahlan in ay qaadaan ama ay u fududeeyaan in ay sii wadaan file ku saabsan qalabka kala duwan iyo dhufto ee multimedia online. Markii la isbarbar dhigo kooban oo qaabab file ayaa hoos lagu siiyey si aad u hubiso ka soo kala suurto gal ah in iyaga.
Qeybta 1: AVI vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVI iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo AVI
Developer Weelka file AVI horumarsan oo ay mid ka mid ah sameeysa ugu caansan oo si fiican u yaqaan, Microsoft. Weelka File Tan waxaa loo dhisay Ururka Caalamiga ah ee jaango'an (ISO). ISO qotonsada caadiga ah ee shirkadaha kala duwan, warshadaha iyo kuwa kale.
Taariikhda Marka Microsoft abuuray ay nidaamka qalliinka u gaar ah, waxayna ahaayeen kuwo u baahan ay software aad u gaarka ah ee nidaamka qalliinka ay sida Windows. Guriga ay wax soo saarka u shaqayn jiray dad badan oo software wakhtigaas. Si ay u badbaadiyaan file maqal ah iyo video, ay loogu talagalay weel cusub oo ahaa AVI. Microsoft horumariyo AVI ee 1992-leh ay daaqadaha-si ay u caawiyaan user ee ciyaaro files multimedia si habsami leh, oo aan la dhexgelin kasta. Xilligaas wixii ka ilaa hadda, AVI waa weelka file warbaahinta ugu fiican in sidoo kale loo isticmaalaa shirkadaha iyo ciyaartoyda warbaahinta. Wax soo saarka ee tayada sare ayaa kor u kacay ay caan waqti. MP4 ma aha weelka file ugu horeysay ee ay soo ISO ah. Marka hore waxay la iman jireen weelasha multimedia-file-ka kooban kale sida Quick Time. Laakiin waxay u baahan yahay si uu u xaliyo qaar ka mid ah cillad ka. Markaas ISO daabacay ay weel lagu noqdey, ka MPEG 4-qayb 14 2003 waxa loo adeegsaday dad badan oo ka mid ah kooxda difaacaneysa qalab iyo dhufto ee kala duwan ee dhagaysto song iyo videos. Mid aad u fudud oo si sahlan loo qaban dabiiciga ah ee qaab taas ka dhigtay in ay ihi oo sidaas awgeed, waxay noqon weelka ugu caansan file in la og yahay ay ku dhowaad user kasta, xilligan la joogo.
Caanka Tani waa mid aad loo jecel yahay ka mid ah dadka isticmaala Microsoft. Ku dhawaad ​​nooc kasta oo ka mid ah qalabka, kombiyuutarka iyo CD ama DVD-yada, in ay xiriir la leh shirkadda Microsoft, taageeraan files weel file AVI. Inta badan qalabka sida MP3 iyo MP4 ciyaartoyda, websites iyo DVDs ogolaan files weel MP4.
Durdurrada Data Weelka file AVI synchronizes file maqal iyo muuqaalka ah, isku mar. Iyadoo hoorto faylka, AVI caawisaa in hoorto ka badan hal audio iyo video files wada laakiin tani caadi ma isticmaalo oo ay ku users weelka file AVI. .Wadashaqayntaas Tani waxay ka caawisaa in Streaming live of audio, video iyo subtitles on qalab kasta oo la qaadi karo ama website live at internet. Weelka file Tani waxay leeyihiin faahfaahin file waxaa gudaha, marka faylka waxaa maamula gudaha ciyaaryahan weelka soo diro tallaabada laga maalay xogta talaabo oo ka dhigaysa socodka joogta ah ee xogta ciyaaryahanka. File ayaa ciriiri gudaha weelka qaab la furay web browser rarid iyo ma u baahan tahay user in uu soo bixi file oo dhan, user si toos ah u arki karaan video ka huleeshay.
Metadata AVI waa mid aad u fudud in qaab-dhismeedka iyo waa u fududahay in la fahmo. Wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, mid waa madax oo kale waa doodiisa. Header ayaa info ugu weyn ee file oo dhan. Si metadata waxaa gudaha, AVI isticmaalaa doodiisa in ay si macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan faylasha. Kuwaas waxaa ka mid ah macluumaad dheeraad ah mudada guud ahaan waqtiga video ama maqal ah, jir xawaaraha halkii labaad, pixels guud ee video, baaxadda iyo Cinwaan, haddii la joogo. DivX, Cinepak, Xvid iyo DV waa codecs taageeray.
Wixii weel kasta oo file, oo ay ku jiraan metadata waa mid aad u muhiim ah. Weelka mar walba meel gaar ah ama goob si ay u dhawrto metadata ee faylka. Metadata Tani waxay ka caawisaa weelka in ay sii macnaha asalka ah ee faylka. MP4 sidoo kale hayaa metadata oo ka mid ah ay ku jiraan files warbaahinta. Metadata ka kooban yahay macluumaad ku saabsan cabbirka faylka, duration of audio ama video, xawaare ku jir halkii labaad iyo Cinwaan video, haddii la joogo.
Faa'iido 1. files Media weel AVI leeyihiin tayo sare leh oo la taaban karo marka loo eego kuwa kale.
2. Codecs oo farabadan ayaa lagu heli karaa in cadaadin karo faylka si ay u socon in ay weel AVI.
3. Looma baahna nooca gaarka ah ee qalabka ama software khaas ah si uu ugu tartamo weelasha file AVI.
4. Weelasha caanka ah oo loo isticmaalo in inta badan audio iyo video files. 1. Online, tiro badan oo ah maqal iyo video files sugantahay weel file MP4.
2. , Inta badan kaamirooyinka duubista iyo qalabka duubista siin file finalka weel MP4.
3. No codec waa ku khasab weel si orod file warbaahinta.
4. Inta badan ciyaartoyda warbaahinta si toos ah u taageeraan forwardly weel MP4.
Qasaarooyinka 1. Haddii aan cadaadisaa faylka la caawiyo of software qaar ka mid ah oo file u dirto qalab kale oo qaar ka mid ah oo aad rabto waa in uu ordo, waxaan u baahan nahay codec isla uncompressing file ee qalab.
2. Compressing fara badan oo boolidii tayada asalka dhexgalo waxa ku jira faylka dhabta ah. 1. Waxaa mararka qaarkood qayb qaniinaa faylasha.
2. The files qayb Tifaftirayaasha, mararka qaar, ma la timaado natiijooyinka tayada loo baahan yahay isla markaana keenaa dhibaatooyin.
3. Qayb ahaan files Tifaftirayaasha qaado meel dheeraad ah marka la barbar dhigo files si buuxda Tifaftirayaasha.
4. Wuxuu u baahan yahay qaar ka mid ah updates in la jaan qaada qaabab file cusub oo waxaa soo baxaya waqti.
U isticmaala in ay Waxaa inta badan loo isticmaalo qalabka isagoo nidaamka qalliinka Microsoft iyo Microsoft software. Weelka file waxaa sidoo kale taageeray Madaxweyne Siilaanyo, qalabka Android, PSP iyo PS3. Aaladaha Apple ma taageeri weel file this. Dhammaan qalabka ku jira oo la qaadi karo sida Sony, Android, Apple iyo Microsoft, isticmaali weel file iyo ku dhawaad ​​ciyaaryahan walba warbaahinta ka waddaa weel file MP4 this.
Related links 1. Waa maxay File AVI ah
2. Qaabka File AVI (faa'iidada iyo khasaaraha 1. MP4 File Description
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo AVI?
MP4 iyo AVI jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
• Download aan xad lahayn YouTube videos.
• YouTube in MP3 downloader.
• Taageerada diinta qaab file in ka badan 150 nooc file.
• U beddelaan si ay u qalab kasta.
• Download iyo ciyaaro videos si deg deg ah.
Sida loo soo bixi MP4 iyo AVI isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo AVI video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare AllMyTube
Wondershare AllMyTube Laga heli karaa labada tijaabo ah iyo sidoo kale version bixisay. Download iyo gashato on your computer. Marka lagu rakibay, double guji toobiye icon in aan bilowno software ah.
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama AVI inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya MP4 ama file AVI in aad rabto in aad kala soo bixi. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli karto MP4 tayada ugu wanaagsan iyo files AVI ah.
Tallaabada 3 Download videos ah
Marka aad dooratay video ah in aad rabto in aad kala soo bixi, tallaabada xigta waa in ay si dhab ah u bilowdo nidaamka download. Waxaad kala soo bixi kartaa videos laba siyaabood:
Jidka 1: By gujinaya ah "Download" button u dhow deegaanka video ah: Marka aad la ciyaareyso videos on websites video caanka ah sida YouTube, waxa aad ka arki kartaa "Download" button sare ee video ah kaas oo ay bixiyaan Wondershare AllMyTube. Dhag siinaya batoonka taasi bilaabi doonaa howsha download in AllMyTube isla markiiba.
(Ikhtiyaar) From menu dropdown ah, waxaad dooran kartaa in dhigay tayada / xallinta video halkii codsigaaga. Ama waxaad kala soo bixi doonaa video ah leh xallinta caadiga ah.
Jidka 2: Isticmaalka badhanka "URL paste": Haddii aadan heli karin "Download" button sare ee video aad rabto in aad kala soo bixi, waxaad isticmaali kartaa "URL paste" button of Wondershare ka AllMyTube. Just nuqul ka URL ee video aad rabto in aad ka soo dejisan iyo paste in interface software iyo bilowdo video ah.
Tallaabada 4 (Ikhtiyaar) Beddelaan Video bixi ku
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 ay u noqon AVI adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "AVI".
Talaabada 5 Play faylka AVI bixi
Marka aad dhamaysato habka la gediyay, faylka la gediyay waxaa laga heli karaa "badaley" qaybta ka halkaas oo aad ka ciyaari kartaa file ama qabtaan hawlaha kala duwan ee ku yaal.
Sida loo Beddelaan VIDEO_TS in MP4 on Windows iyo Mac
AVCHD vs MP4, oo waa ka sii wanaagsan
> Resource > MP4 > AVI vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVI iyo MP4